Warar - Aragti-ku-habboonaanta gudaha ee is-beddelka warshadaha isboortiga
Lululemon wuxuu helay shirkadda jir dhiska ee Mirror
Lululemon waxay sameysay la wareegkeedii ugu horreeyay ee ballaarnaa tan iyo markii la aasaasay, waxayna ku bixisay $ 500 milyan si ay u iibsato shirkadda jir dhiska ee Mirror. Calvin McDonald wuxuu saadaaliyay in Muraayadku faaiido yeelan doono sanadka 2021. Wax soo saarka asaasiga ah ee Muraayaddu waa “Muraayad dhererkeedu dhan yahay”. Markii la xidho, waa muraayad dhererkeedu buuxo oo caadi ah. Markii la furay, muraayada ayaa ah muraayadaha is-dhexgalka leh oo lagu rakibay kamarad gundhig ah iyo afhayeenka, taas oo ka tarjumeysa xaaladda isticmaaleyaasha iyo xogta jir-dhiska waqtiga dhabta ah, sidoo kale waxay ku dhammaystiri karaan koorsooyinka tooska ah ee barayaasha jimicsiga ee internetka.
Bishii Diseembar 10keedii, Lululemon wuxuu sii daayay warbixintiisii ​​waxqabadka rubuc-saddexaad. Iibsashada rubuca ayaa kor u kacay 22% sanadkiiba ilaa US $ 1.117 bilyan, faa iidada guud ee korodhka ayaa kordhay 56%, faa'iidada saafiga ah waxay kor u kacday 12.3% ilaa US $ 143 milyan, iyo qiimaha suuqyadiisu in kabadan labanlaab. Adidas Guusha Lululemon waa mid aan laga sooci karin khibrada macaamiisha iyo xulashada fikradaha tafaariiqda hal abuurka ah iyo la shaqeynta qaar ka mid ah macallimiinta yoga iyo hay'adaha tababarka. Marka hore, macallimiinta waxaa la siiyaa dhar yoga oo bilaash ah, si macallimiintu u xirtaan dharka loo yaqaan 'Lululemon yoga yoga' si ay wax u baraan. Macallimiintani sidoo kale waxay noqdeen Lululemon “safiiro sumcad” si kor loogu qaado wacyiga sumadda. Isla mar ahaantaana, waxay bilawday taxane ah dharka ragga iyo alaabada kale ee durugsan iyo khibradaha khadka tooska ah si loo kordhiyo dhagaystayaasha astaanta iyo rabitaanka iibsashada.
Waxaa horseeday kor u kaca jirdhiska gudaha, horumarinta warshadaha isboortiga gudaha ayaa si tartiib tartiib ah u soo hagaagay. Qaybta 'Mania' waa nooc dharka isboortiga ah. Waxsoosaarkeedu wuxuu xooga saarayaa guulihii laba-geesoodka ahaa ee bilicsanaanta iyo farsamada gacanta. Waxay ku beddeleysaa fikradda moodada sare naqshadeynta dharka isboortiga, waxayna isku dayeysaa inay sahamiso suurtagalnimada dharka isboortiga iyadoo laga eegayo fikradaha kala duwan ee tikniyoolajiyadda, dhaqanka iyo farshaxanka. Naqshadeeyaha caanka ah ee caanka ah ee Carver. Bishii Nofeembar 13, 2020, astaanta dharka isboortiga ee 'Patal Fanatic' ayaa dhameystiray 100 milyan oo yuan C wareega maalgelinta.
Saamaynta cudurkan faafa, warshadaha isboortiga ayaa si xawli leh u kobcaya, iyo kororka suuqa haweenka jir dhiska ah lama indha tiri karo. Waxaa laga arki karaa bilawgii isdabajoogga ee khadadka yoga noocyada isboortiga moodada iyo madadaalada sida NIKE iyo PUMA. Markan, horraantii Maarso ee sannadkan, Adidas iyo Nini Sum waxay iska kaashadeen inay bilaabaan xilli cusub oo moodello iskaashi ah oo gaar u ah haweenka; ku dhiirrigelisay farshaxanno kala duwan sida daabacaadda shaashadda iyo muraayadaha, oo ay weheliso qaab gacmeed dabiici ah oo qurux badan oo gacmo lagu rinjiyeeyey, ayaa ku baraarujisay jiilka cusub ee haweenka. Samee qaybo kala duwan, oo ku habboon fikirka yoga, socodsiinta hawada iyo isboortiga kale.
Iyadoo ka walaacsan isboortiga haweenka iyo caafimaadka, NIKE waxay si rasmi ah u furtay VIP nashaadaad khibrad yoga macaamiisha haweenka, oo ay ka mid ahaayeen wadaagga aqoonta caafimaadka safiirrada haweenka ee NIKE iwm. Tan labaad, NIKE waxay kaloo soosaartay taxane cusub oo yoga ah, taasoo keeneysa khibrad jimicsi oo wanaagsan oo loogu talagalay dadka jecel yoga, iyo dhiirigelinta kartida iyo awooda aysan waligood taaban; marka lagu daro qaababka moodada, waxay fiiro gaar ah u yeeshaan dharka waxqabadka waxayna qaataan diirad gaar ah oo DRI-FIT ah oo si dhakhso leh u qalajinta daal.
Xarunteeduna tahay Munich, Veloine waa ku guuleystaha ISPO2021 Fall Winter Award. Veloine waa nooc cayiman oo baaskiil wadis loogu talagalay haweenka. Astaantu waxay xaqiijineysaa in haween badan ay wali jecel yihiin inay jimicsi sameeyaan inta ay uurka leeyihiin. Adimmada waaweyn ee uurka awgood, waxay badanaa ku khasban yihiin inay xirtaan dharka ragga ee baaskiil wadista, taas oo si aad ah ugu habboonayn qaabdhismeedka jirka ee haweenka uurka leh. Veloine waxay si gaar ah u soo saartay dharka baaskiil ee haweenka uurka leh haweenka uurka leh. Taxane, oo lagu dhex daray naqshad xirfadeed, waxay u keenaysaa difaac haweenka uurka leh